Clipcentric: fitantanana Creative Creative Media sy Lahatsary Video. Martech Zone
Clipcentric: fitantanana Creative Creative Media sy Video
Talata, Jolay 4, 2017 Asabotsy Jolay 8, 2017 Douglas Karr
Clipcentric manome ny mpampiasa miaraka amina karazana fitaovana sy modely manome fifehezana feno ny dingana rehetra amin'ny fizotry ny famokarana ka mahatonga ny doka media-na-valinteny tena mamaly. Ny ekipa doka dia afaka mamolavola haingana sy mamorona doka HTML5 mavitrika izay mandeha amin'ny toerana tsy misy fangarony.
Toeram-piasana Drag-and-Drop - Hisintona ary alatsaho ao anaty sehatr'asa tsy miankina amin'ny fitaovana manokana ny singa doka mba hifehezana tanteraka, ary aiza no ahitanao izay azonao.
Mpanoratra HTML5 matanjaka - Mamokatra be pitsiny HTML5 sary mihetsika mampiasa ny fizotry ny fotoana sy ny keyframe, feno amin'ny hetsika, toerana mafana, ary ny fifandraisana amin'ireo singa doka hafa.
Famoronana fandaharana - Fehezo ny famonoana famoronana in-situ amin'ny alàlan'ny fitsipiky ny angon-drakitra voafaritra mandritra ny fananganana doka na izay nofaritan'ny feed data data anatiny na ivelany.
Flexibility tanteraka - Manamboara endrika endrika doka rehetra, manomboka amin'ny endrika templatized fototra ka hatramin'ny Kintana mitsangana IAB amin'ny endrika ivelany ivelan'ny boaty, ary matokia fa vonona hanompo am-pahavitrihana amin'ireo fitaovana rehetra izy ireo.
Ny endrika dia misy ny doka amin'ny faneva, fanitarana, mitsingevana ary rindrambaiko natao ho an'ny sehatra finday, takelaka, birao, fampiharana, HTML5 ary sehatra video.
Ny Clipcentric dia manala ireo sakana amin'ny vidiny sy ny fahasarotana izay mifandraika matetika amin'ny famokarana doka amin'ny haino aman-jery sy rakotra horonan-tsary, mamela ny mpanjifanay hamokatra haingana dokambarotra fampiroboroboana manan-karena ao anaty trano, tohanan'ny fanondranana olona mahery vaika sy fitaovana fanaovana tatitra.
StudioAd studio dia miaraka amina tonian-dahatsoratry ny filaharana mitete izay manome ny mpampiasa fahalalahana hifehy ny lafiny rehetra amin'ny doka video. Ampidiro ny atin'ny horonan-tsary ary ampanjifa ny sary amin'ny alàlan'ny sary mihetsika, ny vokatry ny feo ary ny mozika. Mamorona doka avy amin'ny rangotra amin'ny alàlan'ny fampiasana ny rakipeo misy rakipeo horonantsary ho an'ny orinasa madinidinika.
Fomba fiasa VideoAd
Tonian-dahatsoratry ny Clip-centric -Famokarana horonantsary haingana sy mora miaraka amina interface interface ho an'ny fananganana doka. Tariho fotsiny ao anaty fandaharam-potoana ny atiny ary ampifanaraho tsara ny fijery sy ny fahatsapana.
Database momba ny atiny media - Midira amin'ny tranomboky misy rakitsary misy antsika, dian-tsarimihetsika, vokam-peo ary sary mihetsika mba hamokarana horonan-tsarimihetsika avo lenta nefa tsy mandany vola amin'ny famokarana.
Fivoahana malefaka - Ampidiro am-pahamendrehana ireo horonan-tsarinao amin'ny fananganana doka haino aman-jery manankarena, alefaso an-tsipika ho an'ireo mpilalao horonantsary mifanaraka amin'ny VAST na ny fivezivezena amin'ny fahitalavitra.
Tags: clipcentricdoka horonantsary mivelatradoka video mitsingevanadoka horonan-tsary in-bannerdoka amin'ny haino aman-jery manankarenadoka amin'ny haino aman-jery manankarenafamokarana doka horonan-tsarydoka videodoka amin'ny rindrina
Lisitry ny lisitra ecommerce: ny farany tsy maintsy haves amin'ny fivarotana an-tserasera
Ad Butler: Serivisy fampidirana WordPress mifangaro